(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၄။)
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၇ ရက်
(၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ရက်)
၁။ ဤဥပဒေကို အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်။
(က) အစားအသောက် ဆိုသည်မှာ ဆေးဝါး ၊ ဆေးရွက်ကြီးနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများမှ အပ လူတို့စားသောက်နိုင်သော စားသောက်ဖွယ်ရာနှင့် ယင်းတို့တွင်ပါရှိသော ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အစားအသောက်ထပ်ဖြည့်ပစ္စည်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခါအားလျော်စွာ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ အစားအသောက်ဟု သတ်မှတ်သော ပစ္စည်းလည်းပါဝင်သည်။
(ခ) အာဏာပိုင်အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားဆေးဝါးဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသော မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ့တွင် ဤဥပဒေပုဒ်မ ၄ ပါ ပြဌာန်းချက်ဖြင့် ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်းသော အဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
(ဂ) ထိန်းချုပ်အစားအသောက် ဆိုသည်မှာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ထိန်းချုပ်အစားအသောက်ဟု သတ်မှတ်သော အစားအသောက်ကို ဆိုသည်။
(ဃ) အစားအသောက်ထပ်ဖြည့်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သော အစားအသောက် ထုတ်လုပ်ပြုပြင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ အစားအသောက်တွင် အရောင်၊ အဆင်း၊ အနံ့၊ အရသာ အတွက် ဖြည့်စွက်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းကို သော်လည်းကောင်း ဆိုသည်။
(င) စံမညီအစားအသောက် ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အစားအသောက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာဏာပိုင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားသည့် အသေးစိတ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီသော၊ အနိမ့်ဆုံး စံထက်လျော့နေသော သို့မဟုတ် အမြင့်ဆုံးစံထက်ပိုနေသော အစားအသောက်ကို ဆိုသည်။
(စ) လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ အစားအသောက် ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနက သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းက ထုတ်ပေးသော ခွင့်ပြုမိန့်ကို ဆိုသည်.
(ဆ) ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သန့်ရှင်းမှုမရှိသော အခြေအနေ ဆိုသည်မှာ အစားအသောက်တွင် အညစ်အကြေး၊ အမှိုက်တို့ဖြင့် ရောနှောခြင်းကြောင့် စားသုံးသူ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်သော သို့မဟုတ် ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေကိုဆိုသည်။
(ဇ) ထုတ်လုပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရောင်းချရန် အလို့ငှာ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရသည့် လုပ်ငန်းများအနက် လုပ်ငန်းအဆင့်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအဆင့် အားလုံး ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။
(ဈ) အရည်အသွေးအာမခံခြင်း ဆိုသည်မှာ စားသုံးသူအတွက် အရည်အသွေးစစ်မှန် ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ကင်း၍ သန့်ရှင်းမှုဆိုသော အစားအသောက်ဖြစ်သည်ဟု အာမခံခြင်းကို ဆိုသည်။
(ည) အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အစားအသောက်ထည့်သော ဘူး၊ ပုလင်း၊ ကတ်ပြား၊ ဘူးခွံ သို့မဟုတ် အစားအသောက်ထုပ်ပိုးသော ပစ္စည်းတစ်ခုခုပေါ်တွင် အမှတ်တံဆိပ် ပြုလုပ်ထားခြင်းကို ဆိုသည်။
(ဋ) ကြော်ငြာခြင်း ဆိုသည်မှာ အစားအသောက်ကို တွင်ကျယ်စွာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် လူအများသိရှိရန် တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆိုသည်။
(ဌ) အယူခံဓါတ်ခွဲခန်း ဆိုသည်မှာ မူလဓါတ်ခွဲခန်းမှ အစားအသောက်နမူနာများကို ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာသည့် အခါ၌လည်းကောင်း၊ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံဝင်သည့် အခါ၌လည်းကောင်း ယင်းအစားအသောက် နမူနာများကို ထပ်မံစစ်ဆေး၍ အပြီးသတ် အဆုံးအဖြတ်ပြုနိုင်ရန် အာဏာပိုင်အဖွဲ့က အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ သီးခြားသတ်မှတ်ပေးသော ဓါတ်ခွဲခန်းကို ဆိုသည်။
(က) အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအသောက်ကို အများပြည်သူသို့ စားသုံးနိုင်ရန်၊
(ခ) ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော၊ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အစားအသောက်ကို အများပြည်သူတို့ စားသုံးမိခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်၊
(ဂ) ထိန်းချုပ်အစားအသောက် ထုတ်လုပ်ခြင်းကို စနစ်တကျကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန်၊
(ဃ) အစားအသောက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း၊သိုလှောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများကို စနစ်တကျ ကွပ်ကဲထိန်းသိမ်းရန်။
၄။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဤ ဥပဒေပါ အစားအသောက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကို သင့်လျော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။
နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီးဌာန
(ခ) အောက်ဖော်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီ-
(ဂ) အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစီ-
၅။ အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်သော အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဝင်သည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
(က) အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြငး၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒ ချမှတ်ခြင်း။
(ခ) အစားအသောက်အတွက် အရည်အသွေးအာမခံခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဂ) အစားအသောက်ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒချမှတ်ခြင်း၊
(ဃ) အစားအသောက် အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒချမှတ်ခြင်း၊
(င) ထိန်းချုပ်အစားအသောက်နှင့် အစားအသောက်ထပ်ဖြည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(စ) စံမညီ အစားအသောက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဆ) အစားအသောက်ကို ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စသုံးသူများ ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ) မူလဓါတ်ခွဲခန်းနှင့် အယူခံဓါတ်ခွဲခန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဈ) ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်းကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ည) အစားအသောက်ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြီးကြပ်နိုင်ရန် အမျိုးသားဆေးဝါး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ ပုဒ်မခွဲ(ဌ)အရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်း ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်များရှိအစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဖြည့်စွက်သတ်မှတ်ခြင်း။
၇။ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်သော အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသည် အစားအသောက် ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီ အာဏာပိုင်အဖွဲ့နှင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
၈။ အာဏာပိုင်အဖွဲ့သည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဌာနတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်အား လွှဲအပ်၍ ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။
၉။ ထိန်းချုပ်အစားအသောက်ထုတ်လုပ်လိုသူသည် လိုင်စင်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသို့ လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက် ရရှိမှသာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။
၁၀။ ထိန်းချုပ်အစားအသောက် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ရှိ/မရှိ ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ကြောင်း ပြုနိုင်သည်။
၁၁။ ထိန်းချုပ်အစားအသောက်မှအပ အခြားအစားအသောက်ထုတ်လုပ်လိုသူသည် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခွင့်ရှိသော အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသို့ လိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်။
၁၂။ သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခွင့်ရှိသော အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသည် လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်၊ လိုင်စင်သက်တမ်း၊ လိုင်စင်ခနှင့် လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခတို့ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
လိုင်စင်ကို ကာလသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ခေတ္တရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၁၃။ မြို့နယ်အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီသည် အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်သူအား ယာယီ သို့မဟုတ် အမြဲတမ်း ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်း ပြစ်ဒဏ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်-
(က) ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သန့်ရှင်းမှုမရှိသော အခြေအနေတွင် အစားအသောက်ကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်း၊
(ခ) အစားအသောက်မှ တစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်သော ရောဂါရှိသူ သို့မဟုတ် အဆိုပါရောဂါပိုး သယ်ဆောင်သူကို အစားအသောက်ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ သယ်ယူပို့ဆောင်သော၊ ဖြန့်ဖြူးသော သို့မဟုတ် ရောင်းချသော နေရာသို့ ဝင်ရောက်စေခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်စေခြင်း၊
၁၄။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စေ၊ အာဏာပိုင် အဖွဲ့ကဖြစ်စေ ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်လျှင် သို့မဟုတ် ဖောက်ဖျက်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆလျှင် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းက လိုင်စင်ကို ကာလသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ခေတ္တရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၁၅။ အာဏာပိုင်အဖွဲ့သည် အရည်အသွေးအာမခံခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ငြိစွန်းသဖြင့် လိုင်စင်ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရသူ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးထားသော အစားအသောက်များကို သိမ်းဆည်းရန် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေး ကော်မတီများသို့ ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
၁၆။ လိုင်စင်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းက လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်ငြင်းပယ်ခြင်း၊ လိုင်စင်ကို ကာလသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ခေတ္တရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်သူသည် ယင်းဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ထံ အယူခံဝင်နိုင်မည်။
၁၇။ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ကချမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။
အရည်အသွေးအာမခံခြင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း
၁၈။ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊
သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်း ပြုလုပ်သူသည် အစားအသောက်အရည်အသွေးအာမခံခြင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စေ၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကဖြစ်စေ ထုတ်ပြန်သောအမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် စည်းကမ်းချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။
(က) အစားအသောက်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်မှု ကျင့်စဉ်များကို လိုက်နာခြင်းရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မိမိလက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများကို အစားအသောက်စစ်ဆေးရေးမှူးများအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။
(ခ) နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နမိတ်၊ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နမိတ်များနှင့် မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နမိတ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် ညှိနှိုင်း၍ လည်းကောင်း၊ အခြားဒေသများတွင် သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့တို့နှင့် ညှိနှိုင်း၍လည်းကောင်း သင့်လျော်သောဝန်ထမ်းများကို အစားအသောက်စစ်ဆေးရေးမှူးများအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။
(ဂ) အစားအသောက်စစ်ဆေးရေးမှူး၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။
၂၀။ (က) အစားအသောက်စစ်ဆေးရေးမှူးသည် မိမိ၏စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။
(ခ) မြို့နယ်အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီသည် အစားအသောက်စစ်ဆေးရေးမှူး၏ တင်ပြချက်ကို စိစစ်ပြီး-
(၁) ပုဒ်မ ၁၃ ပုဒ်ခွဲ(က) သို့မဟုတ် ပုဒ်ခွဲ(ခ) ပါ ပြဌာန်းချက်နှင့် ငြိစွန်းကြောင်းတွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးပြစ်ဒဏ် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်ရမည်။
(၂) ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မ ၂၃၊ပုဒ်မ ၂၄ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၂၅ပါ တားမြစ်ချက်နှင့် ငြိစွန်းကြောင်းတွေ့ရှိပါက ဤဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်။
(၃) စီမံခန့်ခွဲရေး နည်းလမ်းအရ အရေးယူရန်အကြောင်းပေါ်ပေါက်ပါက သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ တင်ပြရမည်။
၂၁။ မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၁၃ အရ ချမှတ်သောအမိန့် တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိရ။
၂၂။ မည်သူမျှ အောက်ဖော်ပြပါ အစားအသောက်ကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်း မပြုရ-
(က) စားသုံးသူကို အဆိပ်သင့်စေနိုင်သော၊ ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အစားအသောက်၊
(ခ) အစားအသောက်၏ သဘာဝ၊ ဒြပ်ဝတ္ထု သို့မဟုတ် အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေပြီး ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် အရာဝတ္ထု တစ်ခုလုံးကို ဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်ပိုင်းကို ဖြစ်စေ၊ အစားထိုးထားသော သို့မဟုတ် ရောစပ်ထားသော အစားအသောက်၊
(ဂ) အစားအသောက်ထပ်ဖြည့်ပစ္စည်းကို သတ်မှတ်ချက်ထက် ပိုမိုအသုံးပြုထားသော အစားအသောက်၊
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာက သတ်မှတ်ထားသည့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဓါတ်ပစ္စည်း အများဆုံးပါနိုင်ခွင့်ရှိသော ပမာဏထက် ပိုမိုပါရှိသော အစားအသောက်၊
(င) သက်ဆိုင်ရာက တားမြစ်ထားသည့် ပစ္စည်းဖြစ်စေ၊ ခွင့်မပြုသည့်ပစ္စည်းဖြစ်စေ ပါရှိသောအစားအသောက်၊
(စ) ပုပ်သိုးသော၊ ပျက်စီးသော သို့မဟုတ် လူတို့စားသုံးရန် မသင့်လျော်သော ပစ္စည်းပါရှိသည့် အစားအသောက်၊
(ဇ) အစားအသောက်တွင် မပါဝင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိကို အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင် လွဲမှားဖော်ပြထားသော အစားသောက်၊
(ဈ) လိုင်စင်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်သည့် ဖော်ပြရမည့်အချက်အလက်များ မပါရှိသောအစားအသောက်။
၂၃။ မည်သူမျှ လိုင်စင်မရှိဘဲ ထိန်းချုပ်အစားအသောက်ကို ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုရ။
၂၄။ မည်သူမျှ လိုင်စင်မရှိဘဲ ထုတ်လုပ်ထားသော ထိန်းချုပ်အစားအသောက်ကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်း မပြုရ။
၂၅။ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြည်ပသို့ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်း ပြုလုပ်သူ မည်သူမျှ အောက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စေ၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့က ဖြစ်စေ ထုတ်ပြန်သော အမိန့်၊ ညွှန်းကြားချက်နှင့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း မရှိစေရ-
(က) အရည်အသွေး အာမခံခြင်း၊
၂၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၁ ပါ ပြဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်အထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၂၇။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၁ ပါ ပြဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရပြီးနောက် ဆက်လက်၍ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ရန် ထိုသူအားဆက်လက်၍ ပျက်ကွက်သည့်နေ့ အသီးသီးအတွက် တစ်နေ့လျှင် ငွေဒဏ်ကျပ် ငါးထောင် ချမှတ်ရမည်။
၂၈။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၂ ပါ ပြဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရလျှင်-
(က) ပုဒ်မခွဲ(က)၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)၊ ပုဒ်မခွဲ(င) သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ(စ)ပါ အစားအသောက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုဖြစ်ပါက ထိုသူအားထောင်ဒဏ် ၃နှစ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်သုံးသိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်၊
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(ဆ)၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ) သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ(ဈ)ပါ အစားအသောက် နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုဖြစ်ပါက ထိုသူအားထောင်ဒဏ် ၁နှစ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ကျပါက ၁၀၀၀ဝဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်၊
(ဂ) ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော သက်သေခံပစ္စည်းများကိုလည်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်။
၂၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၃ပါ ပြဌာန်းချက် ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရလျှင် ထိုသူအားထောင်ဒဏ် ၅နှစ် အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ် တစ်သိန်းမှ အများဆုံးကျပ်ငါးသိန်းအထိ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်၊ ထို့အပြင် ပြစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သက်သေခံပစ္စည်းများကို လည်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်။
၃၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၄ ပါ ပြဌာန်းချက် ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရလျှင် ထိုသူအားထောင်ဒဏ် ၃နှစ် အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ် တစ်သိန်းမှ အများဆုံးကျပ်သုံးသိန်းအထိ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်၊ ထို့အပြင် ပြစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သက်သေခံပစ္စည်းများကို လည်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်။
၃၁။ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြည်ပသို့ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်း ပြုလုပ်သူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၅ ပါ ပြဌာန်းချက် ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရလျှင် ထိုသူအားထောင်ဒဏ် ၃နှစ် အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ် ၁၀၀၀ မှ အများဆုံးကျပ် ၃၀၀၀၀အထိ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၃၂။ (က) နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နမိတ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နမိတ်၊ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နမိတ် များမှ အပ အခြားဒေသများတွင် မြို့နယ်အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေး ကော်မတီသည် အစားအသောက်စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(ခ) ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နမိတ်၊ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နမိတ်များတွင် မြို့နယ်အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေး ကော်မတီသည် အစားအသောက်စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းကို သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
၃၃။ ကိုယ်တိုင်စားသုံးရန်အတွက် မိမိနှင့် တစ်ပါတည်း ပြည်တွင်းသို့ ယူဆောင် လာသော သို့မဟုတ် ပြည်ပသို့ ယူဆောင်သော အစားအသောက်သည် ဤဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။
၃၄။ ဤဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုရာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် ဤကိစ္စအလို့ငှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသ ည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့်ရယူရမည်။
၃၅။ စီးပွားရေး အလို့ငှာ အစားအသောက်ကို ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းရန် ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရန်ဖြစ်စေ၊ ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော အစိုးရဌာန သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်း ကျန်းမာရေး ဦးစီး ဌာန၏ ထောက်ခံချက် လက်မှတ်တင်ပြနိုင်သူကိုသာ ခွင့်ပြုချက် ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
၃၆။ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခွင့်ရှိသော အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း က ထုတ်ပြန်သော အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် စည်းကမ်းချက်များသည် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သော အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် စည်းကမ်းချက်များဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၃၇။ အမျိုးသားဆေးဝါးဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အစားအသောက်စစ်ဆေးရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အမိန့်များသည် လည်းကောင်း၊ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အစားအသောက် စံနှုန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အမိန့်များသည် လည်းကောင်း ဤဥပဒေ နှင့် မဆန့်ကျင်သ၍ ဆက်လက် လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၃၈။ ဤဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-
(က) ကျန်းမားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်ပါက နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းက ဖြစ်စေ၊ အာဏာပိုင် အဖွဲ့ဖြစ်စေ လိုအပ်ပါက အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
THE NATIONAL FOOD LAW
(The State Law and Order Restoration Council Law No 5/97)
The 9th Waning of Tabodwe, 1358 M.E.
(3rd March, 1997)
This Law shall be called The National Food Law.
The following expressions contained in this Law shall have the meanings givens hereunder:
Food means edible thing that human beings can readily eat or drink, ingredient included therein or food additives except drug. This expression also includes thing determined as food by the Ministry of Health by notification from time to time;
Board of Authority means the Myanmar Food and Drug Board of Authority formed under National Drug Law and supplemented under section4of this Law;
Controlled Food Means food determined as controlled food by the Board of Authority from time to time;
Food Additive means the ingredient use in the production and preparation of food, or ingredient for colour and flavour in the food, determined by the Board of Authority;
Food differing from Standards means the food which is not in conformity with the specifications in respect of the relevant food, or food which is lower or higher than the minimum or maximum standards respectively, prescribed by the Board of Authority;
Licence meansapermit granted by the relevant Government department or organization under any existing Law for production of food;
Unhygienic Condition means the condition which may cause injury or danger to the health of the consumer due to contamination of food with dirt and filth;
Production means the operations to be carried out in the manufacture of food for the purpose of sale. This expression also includes the performance of any stage or all stages in the operation carried out in the processes.
Quality Assurance means the warranty that food is of genuine quality, free from danger and hygienic for the consumer;
Labeling Means the act of displaying labels on the container, bottle, pack, outer package or any packing material in which the food is contained;
Advertising means carrying out measures to inform the public directly or indirectly in order to promote distribution and sale of the food;
Primary Laboratory means the laboratory prescribed by the Board of Authority, by notification to analyse samples of the food;
Appellate Laboratory means the laboratory specified by the Board of Authority by notification in order thatafinal and conclusive decision may be made in respect of analysis of samples of food, after reanalysis of samples, whenaproblem arises with respect to analysis of food from primary laboratory or when either party is dissatisfied and files an appeal;
to enable the public to consume food of genuine quality, free from danger and hygienic;
to prevent the public from consuming food that may cause danger or are injurious to health;
to supervise production of controlled food systematically;
to control and regulate the production, import, export, storage, distribution and sale of food systematically.
In order to carry out measures relating to food contained in this Law, the Government shall supplement the following persons as members in the Myanmar Food and Drug Board of Authority:
Director-General, Development Affairs Department, Ministry of Progress of Border Areas and National Races and Development Affairs;
A representative each from the following organizations:- (1) Yangon City Development Committee, (2) Mandalay City Development Committee,
An expert each relating to the following subject:- (1)Food Science, (2)Food Microbiology, (3)Food Industrial Technology, (4)Toxicology.
The non-governmental member of the Board of Authority is entitled to such remuneration as may be prescribed by the Ministry of Health.
Functions and Duties of the Board of Authority
The functions and duties of the Board of Authority formed under
section4are as follows:
Laying down the policy relating to the production, storage, distribution and sale of food.
determining good manufacturing practices with respect to quality assurance of food;
laying down the policies relating to the inspection, control and laboratory analysis of food;
laying down the policy relating to labelling and advertising of food;
determining the kinds of controlled food and food additives;
determining detailed criteria and standards for food, differing from standards;
coordinating with the relevant Ministries with respect to import and export of food for the safety of consumers;
determining primary laboratories and appellate laboratories
forming committees in respect of matters relating to expertise and determining the functions and duties of such committees;
supplementing functions and duties of the State/Divisional,
District, Township food and Drug Supervisory Committees formed under section5,sub-section(1) of the National Drugs
Law to enable supervision of matters relating to food.
A person desirous of producing controlled food shall apply foralicence to the Government department or organization which is authorized to issue the licence, only after obtaining recommendation from the Department of Health.
The Department of Health may in respect of the producing of controlled food scrutinze as to whether or not it is in conformity with the stipulations may issue or refuse to issue the recommendation.
A person desirous of producing food other than controlled food shall apply for the Licence to the relevant Government department or organization which is authorized to issue the same, in accordance with the existing Law.
The relevant Government department or organization which is authorized to issue the licence shall determine the conditions of the licence, tenure, licence extension fees.
Temporary Revocation subject toatime Limit and Cancellation of Licence
The Township Food and Drug Supervisory Committee may passatemporary or permanent prohibitory punishment on the person who commits any of the following acts:-
production, storage or sale of food under unhygienic conditions;
causingaperson who has contracted food-borne infection or who isacarrier of the germs of the said infection to enter or work on the premises for production, storage or, sale of food.
Ifaperson who has obtainedalicence violates or is considered or have violated any order, directive, condition or any condition of the licence issued by the relevant government department or organisation, the Government department or organisation which is authorised to issue the licence may revoke the licence temporarily subject toalimit or cancel it.
The Board of Authority may direct the relevant State and Division, District and Township Food and Drugs Supervisory Committees to seize the food produced and distributed byaperson whose licence has been cancelled due to infringement of any condition relating to quality assurance.
A person dissatisfied withadecision made by the authorised Government department or organisation in respect of the refusal to grant licence, temporary revocation subject toatime limit or cancellation of licence, may file an appeal to the relevant Minister or the Chairman of the Yangon City Development Committee within 60 days from the date of such decision.
The decision of the relevant Minister or Chairman of the Yangon City Development Committee shall be final and conclusive.
Quality Assurance, Labelling and Advertisement
A person who produces, imports, exports, stores, distributes or sells food shall strictly abide by the order, directive and conditions issued by the relevant Government department or organisation or Board of Authority in respect of quality assurance of food, labelling and advertisement.
Assigning of Responsibility as Inspectors
The Ministry of Health:-
Shall assign responsibility as food Inspectors to the staff subordinate to it in order to carry out inspection of food and inspection as to whether or not there is observance of good manufacturing practices;
Shall assign responsibility as food Inspectors to suitable staff in co-ordination with the relevant Development Committee, in Yangon City Development Areas And Mandalay City Development Areas and in co-ordination with the relevant Ministry in other areas; Shall determine the duties and powers of the food Inspector.
Food Inspector shall submit his findings on inspection to the relevant Township Food and Drug Supervisory Committee;
The Township Food and Drug Supervisory Committee after scrutinising the report of the food Inspector,
shall, if infringement of the provision of sub-sections (a) or (b) of section 13 is found, pass any relevant administrative punishment.
shall, if infringement of the prohibition contained in section 22, section 23, section 24 or section 25 is found, take action under this Law;
shall, it cause to take administrative action, arises submit to the relevant government department or organization which is authorised to issue licence.
No one shall fail to abide by any order passed under section 13.
No one shall produce import, export, store, distribute or sell
the following food:-
food that may be poisonous , dangerous or injurious to the health of the consumer;
food wholly or partly substituted or adulterated so as to affect or endanger the nature substance or quality of the food;
food in which food additive is used in excess of the prescribed limit;
food containing agricultural chemicals in excess of the maximum permissible level determined by the authority concerned;
food containing substance prohibited or not allowed by the authority concerned;
food containing putrid, deteriorated substance or substance unfit for human consumption;
food differing from standards;
food, on the label of which property not included in it is wrongly stated;
food, which does not include the information to be stated, as determined by the relevant Government department or organisation which is authorised to issue the licence.
No one shall produce controlled food withoutalicence.
No one shall export, store, distribute or sell controlled food produced withoutalicence.
No one who produces, imports, exports, stores, distributes or sells food shall fail to abide by the order, directive and conditions issued by the relevant Government department or organisation or the Board of Authority in respect of the following:-
Whoever violates the provision of section 21 shall on conviction, be punished with imprisonment foraterm which may extent to one year or fine which may extent to kyats 10000, or with both.
Whoever after conviction for failing to abide by any provision of section 21, fails continuously to abide by the same, shall be punished withafurther fine of kyats 500 for each day during which the failure continues.
Whoever violates any provision or section 22 shall on conviction:-
if is an offence relating to food contained in subsection(a), sub-section(b) , sub-section(c), sub-section(d), sub-section(e) , or sub-section(f) , be punished with imprisonment foraterm which may extend3years, or with fine which may extend to kyats 30000, or with both;
if it is an offence relating to food contained in subsection(g), sub-section(h) , sub-section(i), be punished with imprisonment foraterm which may extend to 1 year, or with fine which may extend to kyats 10000, or with both;
the exhibits involved in the offence shall be liable to be confiscated.
Whoever violates the provision of section 23 shall, on conviction, be punished with imprisonment foraterm which may extend to5years, or with fine which may extend fromaminimum of kyats 5000 toamaximum of kyats 50000, or with both. In addition, the exhibits involved in the offence shall also be liable to be confiscated.
Whoever violates the provision of section 24 shall on conviction, be punished with imprisonment foraterm which may extend to3years, or with fine which may extend fromaminimum of kyats 1000 toamaximum of kyats 30000, or with both. In addition, the exhibits involved in the offence shall also be liable to be confiscated.
Any person who produces, imports, exports, stores, distributes or sells food and who violates the provision of section 25, shall on conviction, be punished with imprisonment foraterm which may extend to3year, or with fine may extend fromaminimum of kyats 1000 toamaximum of kyats 30000 or with both.
In areas other than the Yangon City Development Area and Mandalay City Development Area, the Township Food and Drug Supervisory Committee may carry out inspection of food.
In Yangon City Development Area and Mandalay City Development Area, the Township Food and Drug Supervisory Committee shall carry out the inspection of food, in coordination with the relevant Health Department of the Yangon City Development Committee or the Mandalay City Development Committee.
The provisions of this Law shall not apply to food brought into or taken out of the country together withaperson for personal consumption.
In instituting legal proceedings under this Law, prior sanction of the Ministry of Health or the Organisation or person delegated with powers for this purpose shall be obtained.
The Government department or organisation which is authorised to grant permission to import or export food for commercial purpose shall only grant permission to the person who can submitacertificate of recommendation of the Department of Health.
The order, directives and conditions issued by the Government department or organisation which is authorised to issue licence shall be deemed to be the orders, directives and conditions issued under this Law.
The order relating to the inspection of food issued under The National Drug Law and the orders relating to the standardisation of food issued under any existing law may continue to be applicable in so far as they are not inconsistent with this Law.
For the purpose of carrying out the provisions of this Law:-
the Ministry of Health may issue such rules and procedures as may be necessary, with the approval of the Government;
the relevant Government department or organisation or Board of Authority may issue such order and directive as may be necessary.